Rastrabani.com | एयर एसियाले तिर्‍यो दुई करोड, बाँकी कहिले ? अरु कसले के गरे ? - Rastrabani.com एयर एसियाले तिर्‍यो दुई करोड, बाँकी कहिले ? अरु कसले के गरे ? - Rastrabani.com
एयर एसियाले तिर्‍यो दुई करोड, बाँकी कहिले ? अरु कसले के गरे ?
काठमाडौं । मलेसियाको निजी विमान कम्पनी एयर एसियाले विमानस्थल सेवा शुल्क बापतको बक्यौतामध्ये दुई करोड रुपैयाँ आइतबार तिरेको छ।
सौर्यले भनेको समयमा रकम दाखिला गर्न नसके कानुनअनुसार कारबाही भोग्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएको छ। (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)